‘गोपी सफल नहुँदा दुःखी छु’ : बिपिन कार्की « Ramailo छ
‘गोपी सफल नहुँदा दुःखी छु’ : बिपिन कार्की
अभिनेता बिपिन कार्कीले फिल्म गोपी अन्तिम समयमा आएर खेलेका थिए । फिल्मको कथावस्तु र आफ्नो भूमिका चित्त बुझेर गोपी खेल्न राजी भएको बिपिनको भनाई थियो ।
‘प्रसाद’ बाट प्रशंसा पाएका बिपिन गोपी बाट निकै आशावादी थिए । तर बिपिनको आशा त्यतिबेला निशारामा बदलियो जब फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शनमा सफल हुन सकेन । समिक्षात्मक रुपमा पनि गोपी अब्बल भएन । ‘गोपी’को समिक्षा र व्यापार दुवै निराशजनक भएपछि बिपिनले आफु दुःखी भएको एक प्रेसमिटमा बताएका छन् । बिपिन, बर्षा र सुरक्षासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
उनले खेल्ने नयाँ फिल्म ‘परी : उड्न देऊ’ को प्रेसमिटमा बिपिनलाई सोधियो, गोपी असफल भयो, तपाईं यस्मा के भन्नुहुन्छ ? ‘यसमा म दुःखी छु ।’ बिपिनले छोटकरीमा उत्तर दिए । फेरी सोधियो, गोपी असफलताको जिम्मा तपाईं लिनुहुन्छ कि नाईं ? ‘गोपी असफलताको जिम्मा म लिन्छु’, बिपिनले यति मात्रै भने ।
दिपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्म ‘गोपी’ मा बिपिनसँगै नायिकाद्वय बर्षा राउत र सुरक्षा पन्तको मुख्य भूमिका थियो । फिल्मको पटकथा सामिप्यराज तिमल्सिनाले लेखका थिए भने कार्यकारी निर्माताको रुपमा श्रीधर पौडेल थिए ।